INFINIX လီမိတက်၏ အာမခံ
INFINIX သည် INFINIX အမှတ်တံဆိပ်ပါ ထုတ်ကုန်များနှင့် အပိုပစ္စည်းများ (“INFINIX ထုတ်ကုန်”) များကို INFINIX မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ပုံမှန်အသုံးပြုပါက အဆုံးသတ် ဝယ်ယူသူမှ ဝယ်ယူခဲ့သော နေ့ရက်မှ တစ် (၁) နှစ်အတွင်း ၎င်းထုတ်ကုန်အတွက်သုံးသော ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်မှုတို့တွင် ထိခိုက်မှုရှိမည် မဟုတ်ဟု အာမခံပါသည် (“အာမခံကာလ”)။ INFINIX မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များတွင် နည်းစနစ်ပိုင်း အသေးစိတ်အချက်များ၊ အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များအပြင် အခြားအကြောင်းအရာများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ဤအာမခံနှင့် မသက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များမှာ အဘယ်နည်း။
1. INFINIX ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ ထုတ်ပိုး၍ဖြစ်စေ၊ အတူဖြစ်စေ ရောင်းချထားစေကာမူ INFINIX အမှတ်တံဆိပ် မဟုတ်သည့် ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ INFINIX မဟုတ်သည့် ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူများ သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေသူများမှ သင့်အတွက် ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် အာမခံများ ပေးနိုင်သည့်အတွက် ထပ်မံသိလိုပါက ၎င်းတို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
2. ပျက်စီးမှုမှာ အသုံးပြုသောပစ္စည်း သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ဖန်တီးမှုကြောင့် ဖြစ်ရသည့် အခြေအနေများမှလွဲပြီး အချိန်ကြာလျှင် ယိုယွင်းသွားမည့် ဘက်ထရီများ သို့မဟုတ် အကာဆေးသားများ ကဲ့သို့သော ကုန်ဆုံးနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
3. ခြစ်ရာများ၊ ချိုင့်များနှင့် အပေါက်များတွင် ပလက်စတစ် ကျိုးပဲ့မှုများ အပါအဝင် အမြင်ပိုင်းမှ ထိခိုက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
4. မတော်တဆဖြစ်ရပ်၊ အလွဲသုံးစား သုံးစွဲမှု၊ မှားယွင်းသုံးစွဲမှု၊ အရည်နှင့် ထိတွေ့မှု၊ မီး၊ ငလျှင် သို့မဟုတ် အခြား ပြင်ပအကြောင်းအရင်းများကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။;
5. INFINIX ထုတ်ကုန်ကို INFINIX မှ ထုတ်ပြန်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် မညီဘဲ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့် သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
6. INFINIX သို့မဟုတ် INFINIX မှ ခွင့်ပြုထားသော ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်မှု (အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ခြင်းများ) ကြောင့် ဖြစ်ရသည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများနှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
7. INFINIX မှ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုပုံ ပြောင်းလဲရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့် INFINIX ထုတ်ကုန်တို့နှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
8. INFINIX ထုတ်ကုန် ပုံမှန်အိုဟောင်း ယိုယွင်း၍ဖြစ်စေ၊ သာမန်ပျက်စီး၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ရသည့် ယိုယွင်းမှုများနှင့် သက်ဆိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
9. INFINIX ထုတ်ကုန်မှ အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကို ဖယ်ရှားထားလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဖျက်ထားလျှင်ဖြစ်စေ အာမခံပေးမည် မဟုတ်ပါ။
သင့် INFINIX ထုတ်ကုန်ကို အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွင် မတင်မီ ၎င်းတွင်သိုလှောင်ထားသည့် မီဒီယာများကို သီးခြား အရန်ကူးယူထားပါ။ သင်ကာကွယ်လိုသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အားလုံးကို ဖယ်ရှားထားပါ။ လုံခြုံရေး စကားဝှက် အားလုံးကို ဖြုတ်ထားပါ။
အာမခံ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း သိုလှောင်မှုမီဒီယာပါ အကြောင်းအရာ အားလုံးကို ဖျက်လိုက်ပြီး ပြန်ဖောမတ်ချမည် ဖြစ်ပါသည်။ INFINIX နှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှည်များသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့် INFINIX ထုတ်ကုန်၏ သိုလှောင်မှုမီဒီယာ သို့မဟုတ် အခြားမည်သည့် အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆို ပါရှိသည့် ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်များ၊ ဒေတာ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များ ပျက်စီးပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
အရေးကြီးသည် - INFINIX ထုတ်ကုန်ကို စက်ဖုံးမဖွင့်ပါနှင့်။ INFINIX ထုတ်ကုန်ကို စက်ဖုံးဖွင့်လိုက်ပါက ဤအာမခံ၌ အာမခံပေးမထားသော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ INFINIX သို့မဟုတ် INFINIX မှ ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူမှသာ ဤ INFINIX ထုတ်ကုန်အား ပြင်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသင့်ပါသည်။